सन्दर्भ नारी दिवस : जानीराखाैं पुरूषहरू हाम्रा विराेधी हाेइनन् - Rajmarga
सन्दर्भ नारी दिवस : जानीराखाैं पुरूषहरू हाम्रा विराेधी हाेइनन्
पेरिस । आहा २०१९ को मार्च ८ ! कति स्मरणिय छ भने यो दिन मेरो आफ्नै लागि ! मैले सवारी चालक अनुमतिको परीक्षा पास गरेँ । मेरो परीक्षा लिने महिला थिइन् र म परीक्षा दिने महिला थिएँ ।
सवारी चालिका भएपछि मैले गाडी किनेँ चलाएँ । नया चालिका भएपनि मैले ट्राफीक नियममा कुनै गल्ती गरिन फलस्वरुप आज बाट मेरो दुइ पोइन्ट चालक अनुमति पत्रमा प्लस हुन्छ तर मेरो गाडिको पछाडि अँग्रेजी अक्षरको A लेखेको स्टिकर झुन्डिरहनेछ । यसको मतलब म अझै शिकारु चालिकाकै रुपमा यो बर्ष पनि रहनेछु ।
अचेल लाग्दैछ मैले सवारी चलाउन थालेको बर्षौँ भयो ।
शुरुमा आत्मबिश्वास जगाउन आँफैलाई गाह्रो । ठाडो भिर देख्यौ कि हँसले ठाम छाड्थ्यो । राजमार्ग छिर्न पर्यो कि मुटु ढक्क फुल्थ्यो ।
अचेल सामान्य भएका छन् । म बेलाबेलामा पेरिसको मुटुमा मजाले गाडि चलाउछु र आफैलाई भन्छु, ‘कालु आँफैले आँफैलाई हिम्मत देउ । अरुले गर त भन्छन् तर आँट चाँही तिम्रो मन बाटै आउनु पर्छ ।’
हिम्मतको कुरा बुझ्न बर्षौँ लाग्यो । मैले कति कुरा आँट नगरेकै कारण लस गरेँ । आफ्ना कति राम्रा राम्रा रहरहरु त्यतिकै तिलान्जली दिएँ ।
गाडी चलाउँदा सबै क्षण आउँदा रहेछन् । सबै भन्दा त्यो क्षण मन पर्छ जुन बेला अरुलाई छल्नु पर्छ र तिब्र गतिमा गाडी हाँक्नुपर्छ अनि लिमिट पनि पार गर्नु हुन्न ।
त्यो बेला शिर्फ आँखा परपर हेर्नुपर्छ बस दायाँ बाँया ध्यान दिएर भुल्न मिल्दैन ।
जीवनको लक्ष त्यहि हो । जुन बिन्दुमा पुग्नु छ आँखा त त्यहीँ मात्र पुग्न पर्यो ।
जीवन छोटो छ महिलाहरुले सिक्न पर्ने कुरै आँट पो रहेछ भन्ने लाग्दैछ । रुप रँग चालढाल जिउडाल केहि होइन बस आफ्नो या समाजको लागि राम्रो हुने कुरो पुरा गर्नु नै महिला स्वतन्त्र रहने खुट्किलो हो । चाहे काम होस चाहे परिवार सँभाल्ने कुरो होस चाहे खेलकुद होस चाहे नाट्यशाला !
शुभकामना सबै महिला पत्राहरुलाई ! सम्मान छ हाम्रो स्वतन्त्रता र समानताको कुरा उठाउनेहरुलाई !
दिग्गज र बिद्वान पात्रहरुले हामीलाई ल है तिमीहरु सक्छौ भने अलि बढी नै टाठो बनो सक्दैनौँ भने कम्तिमा घरमा या कामका पुरुष पात्र सरह बन है भनेर चेत खुलाएका छन् । हामीहरु सबैले यति कुरा मनन गरौँ । पुरुष पात्र भन्दा माथि उठ्न कोशिष गर्यौँ भने कम्तीमा हामीहरु अर्थोपार्जन देखि घरधन्दामा बरोबरीको पोजिशनमा आउन सक्छौँ ।
जानिराखौँ पुरुषहरु हाम्रा बिरोधी होइनन । उनिहरु किन बिरोधी देखिन्छन् भने यो समाजमा उनीहरुले महिलाहरु हेपिएर हुर्केको देखे । त्यहि सिके त्यहि लागू गर्न खोज्छन् ।
तर हामीले यसो होइन जमाना फेरीयो भन्न सक्नुपर्छ ।
यति भन्न पनि हिम्मत चाहिन्छ । भन्यौँ भने उनीहरुले पनि थप कुरा बुझ्न पाउँछन् ।
Previous Previous post: स्थानीय तहले खल्तीबाट शिक्षक राख्न पाउँदैन–शिक्षामन्त्री
Next Next post: आज आइतबार, निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् राशिफल
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट रु १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड